UCantwell v. Connecticut (1940)
Ngaba urhulumente angafuna abantu ukuba bafumane ilayisensi ekhethekileyo ukuze basasaze isigidimi sabo senkolo okanye bakhuthaze iinkolelo zabo kwiindawo zokuhlala? Oku kwakuqhelekile, kodwa kwakunzima kumaNgqina kaYehova awakhankanya ukuba urhulumente wayengenalo igunya lokunyanzelisa abantu izinto ezinjalo.
UNewton Cantwell kunye noonyana bakhe babini baya eNew Haven, eConnecticut, ukuze bathuthukise umyalezo wabo njengamaNgqina kaYehova .
KwiNew Haven, ummiselo ofunekayo ukuba nabani na onqwenela ukucela iimali okanye ukusabalalisa iimpahla kufuneka bafake isicelo selayisenisi - ukuba igosa elijongene nalo lifumene ukuba liyi-charity fide okanye inkolo, ke ilayisenisi iya kunikwa. Ngaphandle koko, ilayisenisi iphikisiwe.
I-Cantwells ayifaki isicelo selayisenisi kuba, ngokwamvo abo, urhulumente wayengenaso isikhundla sokuqinisekisa amaNgqina njengenkolo - eso sigqibo sasingaphandle kwegunya likaRhulumente . Ngenxa yoko bebanjelwe inetyala phantsi komthetho owenqabela ukucelelwa okungenasicelo kwemali yeenjongo zonqulo okanye zokuncedisa, kunye nangaphantsi komyalelo wokuphulaphula uxolo ngenxa yokuba behamba ngendlu ngendlu ngeencwadi kunye namaphephancwadi indawo engamaRoma yamaKatolika, edlala irekhodi elinesihloko esithi "Iintshaba" ezihlasela uKatolika.
UCantwell uxelelwa ukuba umthetho wawuthatyathwe phantsi kwecala lokuphulaphula inkululeko yokuthetha inkululeko kwaye inselele enkundleni.
NgoBulungisa uRoberts babhala uluvo oluninzi, iNkundla ePhakamileyo ifumene ukuba imimiselo edinga ilayisenisi yokucela ukuba inkolo ibe yinto ebambelela ekukhulumeni kwaye yanika urhulumente amandla amaninzi ekunqumeni ukuba yimaphi amaqela avunyelwe ukucela. Igosa elikhupha iilayisenisi zokucebisa livunyelwe ukuba libuze ukuba umenzi wesicelo unobangela wenkolo kwaye unqatshelwe ilayisenisi ukuba kweso sizathu isizathu esasingenayo inkolo, esinika amagunya karhulumente igunya elikhulu kunemibuzo yenkolo.
Ukunyanzelisa inkolo njengendlela yokumisela ilungelo layo lokuphila kukuba ukukhanyela inkululeko ekhuselweyo nguLungiso LokuQala kwaye luquka inkululeko ekukhuselweni kweShumi elinesine.
Nangona impazamo ngumbhali ingakulungiswa yizinkundla, inqubo isasebenza njengento engavumelani nomgaqo-siseko:
Kwimeko yokucela uncedo ekuqhubekeni kweembono zezenkolo okanye iinkqubo kwilayisenisi, ukunikezelwa kwezibonelelo ekusetyenzisweni kwamagunya karhulumente malunga nokuba yintoni isizathu senkolo, ukubeka umthwalo onqatshelwe ekusebenziseni inkululeko ekhuselwe nguMgaqo-siseko.
Ukuphulwa kwecala lokuxolisa uxolo kwavela ngenxa yokuba abathathu bamaKatolika bahlala kwiindawo ezinamaKatolika kwaye bawadlalela irekhodi yegronograph, ekubonikweni kwabo, beyihlamba inkolo yobuKristu ngokubanzi kunye neCawa yamaKatolika ngokukhethekileyo. INkundla yawukhusela le ngqungquthela phantsi kokuvavanywa kwingozi ecacileyo kunye neyokhoyo, ilawula ukuba umdla ofunwa ukuxhaswa nguRhulumente awuzange ulungele ukukhutshwa kwemibono yonqulo eyayicasula abanye.
UCanwell kunye noonyana bakhe babeye basasaza isigidimi esingazange siyamkele kwaye siphazamise, kodwa abazange bahlasele umntu.
Ngokutsho kweNkundla, iCantwells ayizange ibe yingozi kwintlalo nje ngokusasaza isigidimi sayo:
Kwiindawo zokholo lwenkolo, kwaye kwimeko yezopolitiko, kukho ukungafani okubukhali. Kuzo zombini iinkalo iziganeko zomntu omnye zingabonakala ngathi yiposenti ephezulu kunommelwane wakhe. Ukukholisa abanye kwisimo sakhe sengqondo, ummangaleli, njengokuba siyazi, ngamanye amaxesha, ukuhlaziywa kwamadoda, ukugqitywa kwamadoda ayenjalo, okanye ahloniphekile kwicawa okanye kwilizwe, kwaye nakwiinkcazo zobuxoki. Kodwa abantu beli hlanga baye bamisela ukukhanya kwimbali, ukuba, naphezu kwamathuba okugqithisa kunye nokusetyenziswa kakubi, le mileko ihlala kwimbono emide, ibalulekile ekuboniseni umbono kunye nokuziphatha okulungileyo kwintetho yabemi beDemokhrasi .
Lo mgwebo ubenqabela oorhulumente ukuba benze iimfuno ezikhethekileyo kubantu abahambisa iingcamango zonqulo nokwabelana ngesigidimi kwindawo engathandekiyo kuba intetho enjalo ayibonakali ngokuzenzekelayo "ingozi kuluntu."
Esi sigqibo saqaphela kwakhona kuba bekuyixesha lokuqala iNkundla idibanise iSigqeba sokuSebenza samahhala kwiSilungiso seshumi elinesibini - kwaye emva kwimeko, ihlala ikhona.
Macuilxochitl: Macuilxochitl, uThixo weNgcakazo kwi-Aztec Religion, Mythology
CS Lewis kunye ne-Christian Allegory
Yiyiphi imohluko phakathi kweDenotation kunye neConnotation?
I-Amazon River Expedition yaseFrancoco de Orellana
Iintlobo zeDatha eziPhambili
Ngubani Ongenza Ukunyamezela?
Inzala kaJohn William "Johnny" Carson - Carson Tree Tree
I-Bengal Indlala ka-1943
Indlela yokwakha iReks Ramps kunye neZithintelo
Umthandazo wokuqonda kunye novelwano kwi-Archangel Chamuel
Ukuqokelela ama-GI Joe Action Figures
Imbonakalo ye-Assemblies of God